नौ समूहलाई आरोहण अनुमति | गृहपृष्ठ
Home समाचार नौ समूहलाई आरोहण अनुमति
on: १२ चैत्र २०७५, मंगलवार १३:५६ समाचार
नौ समूहलाई आरोहण अनुमति
चैत १२ , काठमाडौं । पर्यटन विभागले हिमाल आरोहण अनुमति ‘पर्मिट’ जारी गर्न शुरु गरेको चार दिनमै करीब रू. ४ करोड राजश्व संकलन भएको छ । सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहितका विभिन्न हिमालबाट रू. ३ करोड ९० लाख नौ हजार २९७ राजश्व उठेको विभागको पर्वतारोहण शाखाका रामेश्वर निरौलाले जानकारी दिए ।
यीमध्ये सबैभन्दा बढी सगरमाथाबाट रू.३ करोड ५३ लाख राजश्व उठेको छ । विभागले यो सिजनको गत फेब्रुअरी २७ मा पहिलो आरोहण पर्मिट जारी गरेको थियो । पछिल्लो मार्च २३ देखि २५ सम्म तीन दिनमै रू.३ करोड ८७ लाख राजश्व उठेको छ । वसन्त ऋतुको यो याममा हिमाल आरोहणका लागि १५ भन्दा बढी आरोही दलले पर्मिटका लागि निवेदन दिएकामा विभागले सोमबारसम्म नौ समूहलाई आरोहण अनुमति दिएको छ । यीमध्ये तीन सगरमासहित ल्होत्से, अन्नपूर्ण, कुम्बकर्ण, पुमरी, थापा पिक र छोपबमरी रहेका छन् । वैशाख महीनासम्म आरोहण अनुमति लिने भएकाले आरोहीको संख्या बढ्ने विभागको अनुमान छ ।
सगरमाथा आरोहणको रोयल्टी ऋतुअनुसार फरक–फरक हुन्छ । विदेशी आरोहीले वसन्त ऋतुमा ११ हजार अमेरिकी डलर रोयल्टी तिर्नुपर्नेछ । विभागका अनुसार सन् २०१८ को वसन्त ऋतुमा रू. ४१ करोड २८ लाख ८४ हजार ६३८ रोयल्टी जम्मा भएको छ । योमध्ये सबैभन्दा धेरै सगरमाथाबाट मात्रै रू. ३५ करोड १४ लाख ९८ हजार ३१२ रोयल्टी उठेको छ । सरकारले आरोहणका लागि ४१४ हिमाल खुला गरेको छ, अझै आरोहणयोग्य १३ सयभन्दा बढी हिमाल रहेका छन् । रासस
९ बैशाख २०७६, सोमबार १६:४६
१ बैशाख २०७६, आईतवार १५:३१
२३ चैत्र २०७५, शनिबार १७:१३